Wararka Caalamka Archives - Mudug24
Putin oo ka carooday go’aankii Erdogan kuna dhawaaqay wuxuu sameyn doono.
Maxaa ka jira iyo Madax furasho loo haysto Askartii Tababarka Loogu qaaday Eritrea ?
Dowladda Baxreyn oo ka Hadashay Xaalada Caafimaad ee Madaxweynaha Soomaaliya
Hanjabaadda argagaxa leh ee uu Putin u diray Sweden, Finland iyo NATO
Askeri Soomaaliya ka soo dagaallamay oo si layaab leh ugu bareeray Dagaalka ukrain
Xamaas oo soo bandhigtay Muuqaalka Askari Israa’iili ah oo gacantooda ku jira (Sawirro)
Suudaan oo weerar ku qaadday Itoobiya
Turkiga ayaa aqbalay in Sweden iyo Finland ay ku biiraan Nato. Maxaa beddelay aragtii Ankara ee horay u diidday in labada waddan ay ka mid noqdaan isbahaysiga?
Ciidamada Suudaan oo la wareegay Goobta Muhiim ah Wadanka itoobiya